Golaha Guurtida Mareykanka Ayaa Soo Bandhigay Hindise Sharciyeed Si Loo Sharciyeeyo Weed • Drugs Inc.eu
Golaha Guurtida Mareykanka ayaa soo saaray sharci qabyo ah si sharci loogu sii mariyo marijuana
Saddex ka mid ah senetarada xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa Arbacadii soo bandhigay hindise sharciyeed qabyo ah oo ujeedadiisu tahay sharciyeynta xashiishadda, tallaabadaas oo u oggolaaneysa dadka waaweyn ee Mareykanka ah inay iibsadaan oo ay haystaan ​​illaa 10 wiqiyadood oo marijuana ah iyadoon lala kulmin ciqaab dambiyeed.
De Maamulka Cannabis iyo Sharciga Fursadaha, oo uu xareeyay Hogaamiyaha Aqlabiyada Senate-ka Chuck Schumer, Gudoomiyaha Qasnada Ron Wyden iyo Senatorka New Jersey Cory Booker, waxay mamnuuci doonaan dambiyada marijuana ee aan fadqalalaha lahayn, waxay hormarin doontaa cilmi baaris caafimaad waxayna siin doontaa shirkadaha xashiishka inay helaan adeegyada maaliyadeed ee muhiimka ah.
1 Sharciga Federaalka iyo Sharciyeynta Weed
2 Joe Biden Waa Inuu Ka Gudbaa Xashiishadda Cusub Lawwet
Sharciga Federaalka iyo Sharciyeynta Weed
In kasta oo isticmaalka qaan-gaarka ah ee marijuana ay sharci ka tahay 18 gobol oo caafimaad ahaanna loo oggol yahay 37 gobol, haddana sharci darro ayey ku tahay sharciga federaalka ee Mareykanka, iyadoo laga hor istaagayo bangiyada iyo kuwa kaleba inay ganacsi la yeeshaan shirkadaha iibiya marijuana ama alaabooyinka la xiriira. Hindisaha ayaa dejinaya da'da ugu yar ee lagu iibsan karo xashiishad 21 iyo iibinta tafaariiqda ee heer gobol oo ah 10 wiqiyadood oo xashiishad ah markiiba ama u dhigma mid ka soo baxa xashiishka. Qoraalka ayaa sidoo kale sheegaya in qeexitaan cusub oo xashiishadda ah la qaadan doono.
Dawladuhu waxay xakamayn doonaan haysashada, soo saarista ama qaybinta xashiishadda, qoraalka ayaa yidhi, halka marijuana loo dirayo gobolada aan sharciyeysnayn way mamnuucaysaa. Si kastaba ha noqotee, dowladaha noocaas ah kama hor istaagi karaan shixnadaha inay ka gudbaan xuduudahooda gobollada kale ee sharciga leh.
Senator Chuck Grassley, oo ah ninka ugu sareeya xisbiga Jamhuuriga ee gudiga cadaalada ayaa sheegay in tani ay tahay talaabadii ugu horeysay laakiin waxa uu intaa ku daray in isticmaalka xashiishku u baahan yahay cilmi baaris dheeri ah. Hindise sharciyeedkii ugu dambeeyay ayaa gadaal laga soo gudbin doonaa. Jawaab celin ku saabsan nashqadda wada hadalka waxaa la bixin karaa ilaa Sebtember 1.
Joe Biden Waa Inuu Ka Gudbaa Xashiishadda Cusub Lawwet
Ku aaddan aqoyan Si uu sharci u noqdo, waa in tallaabadu ka gudubtaa labada aqal ee Dimuqraadiga ee ay gacanta ku hayaan Senate-ka iyo Aqalka Wakiillada oo uu saxiixo madaxweyne Joe Biden. "Way adag tahay in la arko sida tani u socon karto, laakiin si kastaba ha ahaatee waa wax wanaagsan in la arko horumar iyo dardar," ayuu yiri Greg Heyman, oo ah aasaasaha shirkadda maalgashiga xashiishadda ee Beehouse Partners.
Michael Boniello, oo ah agaasimaha shirkadda gaarka loo leeyahay ee Poseidon, ayaa yiri: "Hindise sharciyeedka dib-u-habeynta bangiyada xashiishadda ee ay ansixiyeen Golaha Wakiillada Mareykanka bishii Abriil ayaa ku guuldareystay inuu wax horumar ah ka sameeyo Senate-ka." Isagoo intaa ku daray in dib u habeyn lagu sameeyo xashiishadda kale ee federaalka, oo ay ka mid yihiin Sharciga Bangiyada, ayaa caqabad ku noqon kara korsashadeeda sanadka 2021.